जुवाडे पक्राउ गर्ने डिएसपी उमेश लम्साल विवादमा ! | Diyopost
काठमाडौं । जुवा मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अवैध प्रवेशलाई लिएर नयाँ बहस सुरु भएको छ । के अब सम्पूर्ण जुवा खेल्ने जुवाडेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिन्छ ? के अब समातिने सबै जुवाडेको वैध–अवैध सम्पत्ति विभागले खोतल्छ ? के अब सवै जुवा मुद्दालाई प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पठाउँछ त ? यस्ता प्रश्नहरु अहिले बहस बनेका छन् ।
विहिबार प्रकाशित युनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकमा खबर छ– क्षेत्राधिकार नाघेर जुवा मुद्दालाई कमाइखाने भाडा बनाउन लागेको आरोप लागिरहेका बेला विभागका प्रवक्ता एवम् सूचना अधिकारी विनोद लामिछानेले भने उनीहरुलाई ‘सम्वद्ध कसुर’ अन्तर्गत छानविन थालिएको दावी गरे । के जुवालाई विभागले हेर्न मिल्छ त ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने,‘जुवालाई सम्वद्ध कसुर अन्तर्गत अनुसन्धान गर्न मिल्छ ।’
अब गत कार्तिक ९ गते महारनगरीय प्रहरी बृत्त महाराजगञ्जले पक्राउ गरेका २५ जना भीआइपी जुवाडेहरुलाई अब कस्तो कारबाही हुन्छ त ? चासोको विषय बनेको छ । जबकी उनीहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत कारबाही गरिसकेको छ । जुवा मुद्दा हेर्ने अधिकार पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उनीहरुलाई ३० देखि ५० हजार रुपैयाँ धरौंटी लिएर छाडिसकेको छ । मुलुकी अपराध संहिता अनुसार पहिलोपटक जुवा खेल्ने र खेलाउनेलाई ३ महिनासम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी ब्यवस्था छ ।
दोस्रो पटक जुवा खेले वा खेलाएको खण्डमा एक बर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । त्यसपछि पनि जुवा खेले वा खेलाउने कार्यमा संलग्न भए ३ बर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने ब्यवस्था छ । यसअघि जुवाडेहरुलाई जुवा ऐन २०२० अन्तर्गत कारबाही हुँदै आएको थियो । जसमा सजायको न्यून ब्यवस्था थियो । उक्त ऐन अनुसार पहिलोपटक जुवा खेल्नेलाई २ सय रुपैयाँ जरिवाना, दोस्रो पटकदेखि ३ महिनासम्म कैद र तेस्रोपटक पनि खेलेमा एक बर्षसम्म कैदको ब्यवस्था थियो ।
सो क्रममा उनले आफूमाथि जुवाडेहरुले गरेको दुव्र्यवहार पनि जानकारी गराएका थिए । डिएसपी लम्सालको उद्देश्य उनीहरुलाई जति सक्दो बढि थुन्नुमा केन्द्रित थियो । उनी जुवाडेहरुलाई बृत्तमै २४ दिन हिरासतमा राख्न चाहान्थे । यद्यपि विभिन्न बहाना गरेर उनले पटक–पटक म्याद थप गर्न माग गरेर जुवाडेहरुलाई १६ दिनसम्म थुने । जबकी उनीहरुको बयान पक्राउ परेको पहिलो हप्तामै सकिएको थियो । अर्कोतिर, डिएसपी लम्सालकै कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग विवादमा तानिएको छ । आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर मुद्दा हेर्न थालेको विभागले विभिन्न व्यक्तिको उजुरी हाल्न लगाउने तथा सूचना लिएपछि व्यक्तिलाई कार्यालय बोलाएर बार्गेनिङ गर्दै आएको आरोप लागिरहेको थियो । यही बेला विभाग जुवा मुद्दामा फसेको छ ।
उता जुवा खालमा तीन दर्जन बढि जुवाडेहरु रहेकोमा बाँकीलाई पक्राउ नगरेको तथा मुद्दा नचालएको भन्दै बृत्तका डिएसपी लम्साल विवादमा तानिएका छन् । जुवामा च्याँखे थाप्ने, हेर्नेलगायतका ब्यक्तिहरुलाई भगाएर करिब ३ करोड रुपैयाँ प्रहरीले आफ्नो पोल्टामा हालेको जुवाडेहरुबीच चर्चा छ । यद्यपि जुवा खेल्नेलाई विद्यमान कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्नेमा कुनै दुईमत छैन ।